Mhlawumbe usuke wezwa kaningi ukuthi uvo iphasiwedi computer isethwe. Waba yini injongo kwenziwa kanjani? Kungaba khona eziningana. Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi abazali bebeka iphasiwedi ukufinyelela ukhawule ukuhlala ingane noma osemusha e-computer. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ingavikelwa zonke ulwazi oluyimfihlo equkethwe emshinini. Ikhompyutha kuzovimba yimuphi ukufinyelela okungagunyaziwe kuya wonke amafayela eziqukethwe ke, izinhlelo kanye namafolda.
Nokho, ngayo yonke ukuthi kubalulekile ukuba anake kakhulu, futhi iphasiwedi kanye enza irekhodi kangcono futhi zama hhayi ukulahlekelwa.
Nokho, uma-ke ngakho kwenzeka ukuthi ulahlekelwe, ukhohlwe noma ngephutha ushintshe iphasiwedi, sihloko yami uzokutshela ngokuningiliziwe mayelana nendlela ukususa iphasiwedi kusuka kukhompyutha.
Yiqiniso, lokhu inkinga isixazululekile, futhi usebenzisa imiyalelo yami, maduze uthole ithuba ukusebenza kukhompyutha yakho, kuyilapho kulondolozwa yonke idatha yabo.
Indaba yakhe mayelana nendlela ukususa iphasiwedi kusuka kukhompyutha, nganquma waqhekeka waba izingxenye eziningana. Ekuqaleni, sizogxila okudingayo kule nqubo, bese mina izogxila uhlu lezinyathelo, kuncike ohlelweni lokusebenza efakwe kudivayisi yakho.
Ngakho, indlela ukususa iphasiwedi kusuka kukhompyutha, futhi ukuthi lokhu kudinga.
Nokho, yebo, ngaphandle ikhibhodi computer igundane , asikwazi ukukwenza. Ngaphezu kwalokho, ngisho kwezinye izimo kungase kudingeke futhi idiski ebhuthini.
Indlela ukususa iphasiwedi kusuka kukhompyutha. izincomo inemininingwane yonkhe ledzingekako.
Okokuqala, kudingeka uqale kabusha idivayisi iphinde ngaphambi Windows ukuqalisa isikhathi ucindezela ikhi F8.
Esikhathini imenyu ezihlongozwayo, khetha "Layisha kwimodi ephephile", bese ucindezela Faka.
Uyabona uma ucacise (noma othile ngenxa yesicelo sakho), igama lomsebenzisi. It kumele ishintshwe ukuze "umlawuli" noma "umlawuli". Kungani becabanga kanjalo? Ngoba ngokuzenzakalelayo, le i-akhawunti awukaze ivikelwe iphasiwedi kanye awudingi ukuba baveze imibono string "iphasiwedi" akukho izinhlamvu noma izinombolo. Vele uchofoze u- "KULUNGILE" - lena ngempela ngokwanele.
Kukhompyutha ubonisa umlayezo othi esibukweni ukuthi isitimu yakho yokusebenza ngebhuzu kwimodi ephephile.
Vuma uphinde uqhubekele "Qala". Kube kuyodingeka ukhethe "Iphaneli yokulawula" bese "User Accounts."
Uzodinga ukukhetha isithonjana, ukufinyelela okuyinto lulahlekile. Ukhetha?
Uvele ungowakho, ngakho-ke ungenza izinguquko ezidingekayo ukuze yonke ibhokisi lengxoxo, kuhlanganise maqondana iphasiwedi.
Indlela ukususa iphasiwedi kusuka kwikhompyutha yakho manje obaziyo. Kuleso simo, uma uthanda ukuyishintsha, khumbula inhlanganisela entsha. Okungcono nakakhulu, yenza inothi!
Chofoza "Shintsha iphasiwedi" futhi uqalise idivayisi.
Indlela ukususa amafasitela 7 iphasiwedi nge-computer, i-Vista, i-XP Professional
Vula kudivayisi yakho.
Ngena ngemvume ngokukhetha igama "Umqondisi".
Lapho ubona ukubingelela ejwayelekile, cindezela ikhibhodi Ctrl, Alt, futhi Del kanyekanye.
Uzodinga "Shintsha iphasiwedi" inkinobho, khetha ke, bese ohlwini ezihlongozwayo, ukuthola oyifunayo igama lomsebenzisi.
Iphasiwedi entsha uzodinga amaphuzu kabili. Noma, kabili cindezela «Faka».
Zizwe ukhululekile chofoza "OK".
Qala kabusha i-computer.
Manje ungaya, usebenzisa iphasiwedi yakho entsha.
Ngezinye izikhathi kufanele ukubuyisela i-akhawunti Administrator amalungelo.
Kuleso simo, uma i-computer has ngaphezulu yimaphi ama-akhawunti ngokufinyelela okunqunyelwe, uzodinga ukuba ungene ngemvume nge kubo:
Ngezinye ngokuchofoza kuqala "Qala", bese kudingeka ukugijima "Gijima."
Umugqa uvele "Vula" uhlobo ukulawula userpasswords2 futhi ngazo inkinobho "OK" esikrinini noma «Faka» on the ikhibhodi.
Phambi kwakho uzobona "User Accounts" lapho uzodinga "Abasebenzisi" ithebhu.
Khetha igama ofuna bese uchofoza "Shintsha iphasiwedi."
Manje ngoba sewuyazi ukuthi kanjani ukususa iphasiwedi noma kusuke kukhompyutha okuyinto yiluphi uhlelo lokusebenza olufakwe. Ngiyaqiniseka ukuthi uma ubambelela imiyalelo enginazo, ubunzima ungeke ube.
Kungani ungazami ukubheka flash drive-Windows 7, yini okufanele uyenze?
Intuthu sigubhu ngezandla zabo kwaze kwaba ngaphandle imbiza